လက်ရှိပြုလုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဟာ အဆင့်တွေ များလွန်းတဲ့အပြင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မူဘောင်က လည်း တင်းကြပ်မှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် နောက်လာမယ့် ၂၁ရာစုပင်လုံ အစည်းအဝေးတွေမှာ ဆွေးနွေးပွဲပုံစံတွေ ကို ပြောင်းလဲဖို့ အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ အစုအဖွဲ့တွေ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွား မယ်လို့ UDDJC အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
UPDJC အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တွေ အပါအဝင် အစုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီက ထပ်တိုး အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးစီ တွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေး သွားကြဖို့ရှိတယ်လို့ UPDJC အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးစိုင်းကျော်ညွန့် ကပြောပါတယ်။
“ညီလာခံ အခင်းအကျင်းအပါအဝင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပုံအဆင့်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ မူဘောင်ဖြစ်စေ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး လာမယ့် စက်တင်ဘာ ဒုတိယအပတ်မှာ အကြမ်း ဖျဉ်း တွေ့ဆုံကြမယ်ဆိုပြီး သဘောတူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ဒုတိယအပတ်မတိုင်ခင်မှာ ကတော့ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့ဖြစ်စေ၊ အစိုးရအစုအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်ဖြစ်စေ သူတို့ လက်ရှိအခင်းအကျင်း ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကို ပြင်ဆင်မယ်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် လည်းရှိပါတယ်။”
လက်ရှိမူဝါဒချမှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုပုံစံအဆင့်ဆင့်ကတော့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ ပြုလုပ်တဲ့ လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေကတဆင့် ရလာတဲ့အချက်တွေကို အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို တင်ပြရပါတယ်။ အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲက အတည်ပြုတဲ့အချက်တွေကို UPDJC က ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းကော် မတီတွေမှာ ထပ်မံဆွေးနွေးပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကဏ္ဍအလိုက်ကော်မတီတွေက ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်တဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို UPDJC အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။
UPDJC မှာ အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့ အစိုးရအစုအဖွဲ့၊ နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့နဲ့ အပစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆိုပြီး အစုအဖွဲ့ ၃ ခုရှိရာမှာ ဆွေးနွေးချက် တစ်ခုကို အစုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ကန့်ကွက်မယ်ဆိုရင် အတည်မပြုဖို့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမူဘောင်မှာ သဘောတူထားပါတယ်။
UPDJC မှာအစုအဖွဲ့အားလုံးက သဘောတူတဲ့အချက်တွေကိုသာ ၂၁ ရာစုပင်လုံ ညီလာခံအစည်းအဝေးတွေမှာ တင်ပြဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက် လုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာ ရလဒ်တွေ ထွက်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်းနဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမူဘောင်၊ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်မှုနဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ပြန်သုံးသပ်ဖို့ တတိယအကြိမ် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ နောက်ဆုံးနေ့က ပြောခဲ့ ပါတယ်။
ဒီအခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားဖို့ တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမလုပ်ခင် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံပြီး အဆုံးအဖြတ်ပေးဖို့ လိုတယ်လို့ UPDJC ဒုဥက္ကဌ ဒေါက်တာလျန်မှုန်းဆာခေါင်းက ပြောပါတယ်။
Myanmar must spend some time and thoughts on producing it's own basic arms and ammunition. Peace will come by itself. It is time, we should be able to stop relying on others. It is too expensive; from un wanted dams to teak, jade to copper, gas to deep sea port; land to agriculture, ancestral culture to daughters. We must not be CANCER, killing our own. This culture of internal discrimination and extreme selfishness have to change from within.
Aug 21, 2018 09:09 PM